कोरोना उपचारका सामान ल्याउन गरेको ओम्नीसँगको ठेक्का रद्ध ,६ करोड धरौटीसमेत जफत हुने - Gokarna News from Nepal
बुधबार, चैत १९, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौं – स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि चाहिने सामाग्री ल्याउन ओम्नी व्यापारिक समूहलाई दिएको ठेक्का रद्द गरेको छ।
विभाग प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ओम्नी समूहले राखेको ६ करोड धरौटीसमेत जफत हुने भएको छ।
उसले ३० गते (मार्च ३०) सम्म सामान ल्याउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो, ल्याएन। दोस्रो लटको सामान पनि भोलिसम्म ल्याउने भनेको प्रक्रियासमेत सुरू गरेको छैन, उनले भने,सामान चीनमा थुपारेको छु। रेडी छ जहाज पनि रेडी छ भन्यो हामीले होला त भन्यौँ। अरूले पनि सामान ठीक पारेका थिएनन् त्यसैको फाइदा उठाएर ठगेर खान खोजेको रहेछ। त्यसैले ठेक्का रद्द गर्‍यौं।
बजारमा सामान अभाव भएका बेला उसले भनेजति सामान ठीकठाक पारेको छु भन्ने विश्वास दिलाएकाले ठेक्का दिएको उनले बताए।
सामान रेडी छ, प्लेन रेडी छ भन्यो। तपाईंलाई भोक लाग्या बेलामा कसैले खान दिए खानुहुन्न। गोजीमा पैसा छ भोक लाग्या छ भने बीस रूपैयाँको चियालाई ४० रुपैयाँ हाल्नु हुन्छ नि होइन? चिया ल्याउने बेलामा तातोपानी पनि ल्याएन भने के हुन्छ तपाईं पैसा तिर्नुहुन्छ? त्यस्तै हामीले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेका हौं उसको धरौटी पनि जफत हुन्छ, उनले भने,हामीले समानको पेमेन्ट गरेको छैनौं।
ओम्नीले ल्याउने भनेको पहिलो लटको सामान ल्याउँदा नेपाल सरकारले उसैले पेमेन्ट गर्ने गरी जहाज चार्टड गरिदिएको थियो। जहाजको पैसा कसरी ऊसँग लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने ऊ अदालत जाला।
पहिलो लटमा ल्याउँछु भनेको सामानको १० प्रतिशत पनि सामान नल्याएको उनले बताए।
अस्ति ल्याएको सामानको हिसाबले १० प्रतिशत भएपनि पैसाको हिसाबले त्यो १८ प्रतिशत पैसाको सामान हो, उनले भने। मार्च ३० मा पहिलो लट, अप्रिल २ मा दोस्रो र अप्रिल ५ मा अन्तिम लटको सामान ल्याउने सम्झौता भएको थियो। पहिलो लटमै कम सामान ल्याएको ओम्नि ग्रुप त्यसपछि सम्पर्कमै नआएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको हो।
ओम्नीसँग सरकारले १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता गर्दा ओम्नीले ६ करोडभन्दा केही बढी पैसा धरौटी राखेको थियो।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले १५ गतेभित्र सामान ल्याइसक्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि विभागले मन्त्री भानभक्त ढकाल लगायतको रोहबरमा खरिद प्रकृया सुरू गर्न मेडिकल सामान सप्लायर्सहरूसँगको पहिलो बैठक डाकेको थियो। त्यो बैठकमा धेरै व्यापारीले तीनदिन भित्र सामान ल्याउँछु भन्न सकेनन्न। सात कम्पनीले भने हामीले सक्छौं भनेका थिए। ती सात कम्पनीलाई आफूहरूले ३ घण्टाको समयमा कोटेसन भर्न लगाएको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्। त्यो तीन घण्टामा कोटेसन भरेर पठाएपछी ओम्नीलाई नै विभागले ठेक्का दिएको थियो।
त्यसमाथि ओम्नीसँग सरकारले किन्न लागेका एन ९५ माक्स, थर्ममिटर लगायतका सामान बजार मूल्य भन्दा पनि महङ्गो भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अब नयाँ ठेक्का प्रकृया सुरू भएको जानकारी पनि श्रेष्ठले दिए।
भोलि नै हामीले पुरानो सूचना अनुसार ठेक्का आवेदन दिएका व्यापारीलाई बोलाउन सूचना जारी गर्ने छौं। कति सामान उनीहरूले दिन सक्छ सोध्छौं। सकेन भने नयाँ सूचना आह्वान गर्छौं, उनले भने,अस्ति बजारमा सामान अभाव भएकाले हामीले २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि सामान किन्न ठेक्का दिएका थियौं। अब चीनले पनि पिपिईलगायतका सामाग्री उत्पादनलाई तीब्रता दिएको सूचना पाएका छौं। अब सामान सस्तो हुन्छ।